Ananda Marketing, Author at ananda
Home / Archives for Ananda Marketing
ananda (အနန္တ) ၏ တစ်နှစ်တာ ခရီးစဉ်
28th မေ 2019 by Ananda Marketing
ရန်ကုန် – မြန်မာ၊ မေလ ၂၅၊ ၂၀၁၉။ ananda ၏ တစ်နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည် နေ့ကို ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပြီ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ၁၂လတာကာလကို ပြန်လည်သုံးသပ်မိပါသည်။ စတင် ရောင်းချချိန်မှာ တမူထူးခြားတဲ့ အစီအစဉ်များနဲ့ ရန်ကုန်မြို့ တွင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး၊ နောက်ပိုင်းမှာ ရန်ကုန်မြို့တွင်သာမက မန္တလေးမြို့တွင်လည်း ပိုမိုကောင်းမွန်သော အစီအစဉ်များကိုလည်း ယူဆောင်လာ ပေးခဲ့ပါသည်။ ananda သည် မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင် ၁၀ဝ ရာခိုင်နှုန်းပိုင်ဆိုင်ပြီး မြန်မာနိ်ုင်ငံတွင် တိုးတက် လာနေသည့် စားသုံးသူကဏ္ဍ နှင့် စီးပွားရေးကဏ္ဍတို့တွင် မာတီမီဒီယာနှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာများ ဝန်ဆောင်မှု ပေးနေသည့် ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် မေလတွင် ရန်ကုန်မြို့၌ ananda ကို ဈေးကွက်ထဲတွင် စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး နေ့စဉ်လို […]
20th ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2019 by Ananda Marketing
YANGON, Myanmar – February 20, 2019 – ananda has announced today that its head office moved to No. 114, Kabar Aye Pagoda Road, Sayarsan Ward, Bahan Township, Yangon, Myanmar (Location Map: Link). The new head office is easily accessible by public transportation and is bound to become one of the fastest growing companies in Yangon’s […]
မန္တလေးမြို့တွင် ananda (အနန္တ) ဝန်ဆောင်မှုစတင်
10th ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2019 by Ananda Marketing
ananda အင်တာနက်ဒေတာဝန်ဆောင်မှုက မန္တလေးကို စမတ်စီးတီး အဖြစ် တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာရန် ပံ့ပိုးပေးသွားမည်။ ရန်ကုန်၊ ၁၀ အောက်တိုဘာလ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်။ ။ မြန်မာ့ဒစ်ဂျစ်တယ်လောကကို ပြောင်းလဲပုံဖော်ပေးနိုင်သူ ananda (အနန္တ) နှင့် Wave Money တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ 4G+ အင်တာနက်အတွက် မိုဘိုင်းဖုန်းမှတဆင့် ငွေပေးချေမှုကို လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိစွာနှင့် လွယ်လင့်တကူ လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန် မိတ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းခဲ့ကြသည်။ ယခုကဲ့သို့ ပူးပေါင်းမှုကြောင့် ananda (အနန္တ) သုံးစွဲသူများသည် မိမိတို့ ဝယ်ယူအသုံးပြုလိုသည့် အစီအစဉ်များနှင့် ပလန်များကို မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့တွင်ရှိသော Wave Money ဆိုင်များနှင့် Wave Money အက်ပလီကေးရှင်းတို့မှတဆင့် လျင်မြန်လွယ်ကူစွာ ငွေဖြည့်နိုင်ကြတော့မည်ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်ရှိ နိုဗိုတယ်ဟိုတယ်တွင် ကျင်းပသော ယနေ့အကျိုးတူပူးပေါင်းမှု လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ အခမ်းအနားတွင် ananda […]
ongo နှင့် ananda မိတ်ဖွဲ့ပူးပေါင်း၍ မြန်မာ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ကဏ္ဍကို ပူးပေါင်းမြှင့်တင်
19th ဒီဇင်ဘာ 2018 by Ananda Marketing
ငွေစက္ကူသုံးရန်မလိုသည့် လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်လာစေရန်ရည်ရွယ်သည့် ongo နှင့် ananda ပူးပေါင်းမှုက သုံးစွဲသူများ၏ စစ်မှန်သော ဒစ်ဂျစ်တယ် ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံကို ရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်စေရန် လုပ်ဆောင်ပေး။ ရန်ကုန်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၉ ရက်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်။ ။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုကဏ္ဍ၌ ဈေးကွက် တွင်ဦးဆောင်နေသူ ongo နှင့် မြန်နှုန်းမြင့် 4G+ ဒေတာအော်ပရေတာ ananda တို့သည် ယနေ့ Pan Pacific ဟိုတယ်ရန်ကုန်တွင် မိတ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းကြောင်း နှစ်ဦးသဘောတူလတ်မှတ်ရေးထိုးသည့် အခမ်းအနား ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ ပါသည်။ ထိုသို့မိတ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းမှုသည် ananda သုံးစွဲသူများ၏ မိမိအင်တာနက်အကောင့်များကို မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ရှိ ongo အေးဂျင့်ဆိုင်များတွင်လည်းကောင်း၊ Ongo အက်ပလီကေးရှင်း၊ my ananda အက်ပလီကေးရှင်းတို့မှ လည်းကောင်း လွယ်ကူစွာ ငွေဖြည့်သွင်းနိုင်စေသည်သာမက […]
ananda (အနန္တ) မှ ချာလီချက်ပလင်၏ ဂန္ထဝင်ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်သော “The Gold Rush” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို MEMORY! Film Festival တွင် တင်ဆက်ပြသ
10th နိုဝင်ဘာ 2018 by Ananda Marketing
ရန်ကုန် ၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ။ ။ ၆ နှစ်ပြည့်၊ ၅ ကြိမ်မြောက်ကျင်းပသည့် MEMORY! International Film Heritage Festival တွင် ချာလီချက်ပလင်၏ ဂန္ထဝင်ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားဖြစ်သော The Gold Rush ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို ananda (အနန္တ) မှ တင်ဆက်ပြသသွားမည်ဖြစ်သဖြင့် နွေးထွေးသော၊ ပျော်ရွှင်မြူးတူးဖွယ်ကောင်းသော ညနေခင်းအချိန်ကာ လလေးမှ ရုပ်ရှင်ချစ်သူပရိသတ်များကို စောင့်ကြိုလျက်ရှိသည်။ ပရိသတ်အများအပြား၏ သဘောကျနှစ်ခြိုက်စွာ ကြိုက်နှစ်သက်အားပေးခြင်းကို ခံရသော အဆိုပါ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံတွင် နိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့၌ ပြသပေးသွားမည်ဖြစ်ကာ အဆိုပါရုပ်ရှင်ပွဲတော်သည် under the stars with movie stars ရုပ်ရှင်ပွဲတော်၏ […]
မြန်မာနိုင်ငံ၏ 4G+ ဒေတာဝန်ဆောင်မှုအား ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းဖြင့်ငွေပေးချေနိုင်ရန် ananda (အနန္တ) မှ Wave Money နှင့် မိတ်ဖက်အဖြစ်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်
10th အောက်တိုဘာ 2018 by Ananda Marketing
Wave Money နှင့် ငွေပေးချေပြီး ပိုမိုပြည့်စုံတဲ့ဘဝမှာ နေထိုင်ကြပါစို့ ရန်ကုန်၊ ၁၀ အောက်တိုဘာလ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်။ ။ မြန်မာ့ဒစ်ဂျစ်တယ်လောကကို ပြောင်းလဲပုံဖော်ပေးနိုင်သူ ananda (အနန္တ) နှင့် Wave Money တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ 4G+ အင်တာနက်အတွက် မိုဘိုင်းဖုန်းမှတဆင့် ငွေပေးချေမှုကို လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိစွာနှင့် လွယ်လင့်တကူ လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန် မိတ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းခဲ့ကြသည်။ ယခုကဲ့သို့ ပူးပေါင်းမှုကြောင့် ananda (အနန္တ) သုံးစွဲသူများသည် မိမိတို့ ဝယ်ယူအသုံးပြုလိုသည့် အစီအစဉ်များနှင့် ပလန်များကို မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့တွင်ရှိသော Wave Money ဆိုင်များနှင့် Wave Money အက်ပလီကေးရှင်းတို့မှတဆင့် လျင်မြန်လွယ်ကူစွာ ငွေဖြည့်နိုင်ကြတော့မည်ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်ရှိ နိုဗိုတယ်ဟိုတယ်တွင် ကျင်းပသော ယနေ့အကျိုးတူပူးပေါင်းမှု လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ အခမ်းအနားတွင် ananda (အနန္တ) […]